Liyini iNhloko Yezimpawu?
I-Seal Head isetshenziselwa ukuvala ukuphela kwesitsha ukuze izinto zangaphakathi nezangaphandle zokuhlukaniswa kwemidiya, ezaziwa nangokuthi ikhava yokuphela.Iyingxenye yesitsha futhi ixhunywe kwisilinda ngokushisela. Ngokuya ngezimo ezehlukene zejometri, ingahlukaniswa ibe i-hemispherical, ...
Umphumela wenqubo yokwelashwa kokushisa kuzakhiwo zemishini zensimbi
Ukwelashwa ngokushisa kwensimbi kuyinqubo lapho ubuciko bensimbi bushubiselwa khona ezingeni lokushisa elifanele endaweni ethile, bese ipholile ngejubane elihlukile ngemuva kokugcinwa kwe-BAI kulokhu kushisa isikhathi esithile. izinqubo ezibalulekile ekusebenzeni ...
Ungayikhetha kanjani impahla yomshini?
Izingxenye zemishini zibhekisa kwiyunithi eyisisekelo yomshini, njengamabhawodi, izikulufo, okhiye, amagiya, ama-shave, izikhonkwane zasentwasahlobo, njll. Izingxenye zemishini ze-BAI zihlukaniswe zaba izingxenye ezijwayelekile nezingxenye ezikhethekile Izingxenye ezijwayelekile zibhekisa ezingxenyeni ezingaba kabanzi esetshenziselwa imishini eyahlukahlukene, izingxenye ezikhethekile ...